Mpanamboatra hafanana hafanana - Orinasa mpanamboatra hafanana any Shina
Rafitra madio HVAC
Fitaovana fikirakirana ny rivotra mitambatra
Fanadiovan-drivotra amin'ny disinfec ...
Horonam-bokatra maotina modely C ...
Andriamby CVE andiany maharitra ...
Sandwich volon'ondry am-bava P ...
Mpanakalo hafanana miovaova amin'ny takelaka
Fitsipika miasa amin'ny takelaka hafanana mifanakalo hafanana: foil aluminium roa mpiray tanindrazana no mamorona fantsona ho an'ny renirano madio na reraka. Afindra ny hafanana rehefa mikoriana miampita amin'ireo fantsona ny riandrano, ary misaraka tanteraka ny rivotra sy ny rivotra madio. Endri-javatra: fanarenana hafanana azo tsapain-tanana Fisarahana tanteraka ny rano madio sy ny fantson-drivotra hafanana Fahombiazana amin'ny famerenana amin'ny laoniny hatramin'ny 80% gazety an-tsisin'ny lafiny 2 mamorona fefy roa miforitra tanteraka famehezana. Fanohitra ny fahasamihafana eo amin'ny tsindry ...
Mpanakalo hafanana miampita hafanana
Fitsipika fiasan'ny Air Counterflow Sensible Air Sensible to Air Plate Heat Exchangers: foil aluminium roa mpiray tanindrazana no mamorona fantsona ho an'ny renirano madio na reraka. Afindra ny hafanana rehefa mikoriana miampita ny riandrano an'habakabaka ary mikoriana mivadika amin'ny alàlan'ny fantsona ny onjam-paritra, ary misaraka tanteraka ny rivotra madio sy rivotra madio. Endri-javatra lehibe: 1.Ny famerenana hafanana mahatsiravina 2.Fampisarahana tanteraka ny renirano madio & fantsona 3. Fahombiazan'ny fanarenana hafanana hatramin'ny 90% 4.2-press press-5 mamorona 5 ....
Fitsipika miasa an'ny Holtop Crossflow Plate Fin Total Heat Exchangers (ER Paper ho an'ny core exchange exchange) Ny takelaka fisaka sy ny takelaka mihombo dia mamorona fantsom-pifamoivoizana na rivotra mafana. Rehefa mandalo ilay mpanamory rivotra amin'ny alàlan'ny hafanana, ny angovo sitrana. Endri-javatra lehibe 1. vita amin'ny taratasy ER, izay asongadin'ny hafanana avo be, ny fahateren'ny rivotra tsara, ny fanoherana ny ranomaso ary ny fanoherana ny fahanterana. 2. wit voarindra ...
Mpanakalo hafanana Rotary
Endri-javatra lehibe an'ny exchanger hafanana rotary: 1. Fahombiazana avo lenta amin'ny fanarenana hafanana ara-tsaina na fiderana 2. Ny rafitra famehezana roa labyrint dia manome antoka ny famoahana rivotra kely. 3. Ny ezaka fanadiovan-tena dia manalava ny tsingerin'ny serivisy, mampihena ny vidin'ny fikolokoloana. 4. Ny sehatr'asa fanadiovana roa sosona dia mampihena ny fivezivezena avy amin'ny rivotra mankamin'ny fantson-drivotra. 5. Ny fametahana andramana amin'ny vanim-potoana dia tsy mila fikojakojana amin'ny fampiasana mahazatra. 6. Ny kabary anatiny dia ampiasaina hamatorana ara-mekanika ny lamin'ny rotor mba hanamafisana ny kodiarana. 7. ...
Mpanakalo hafanana hafanana
Mampiavaka ny fantsom-panafana hafanana 1. Mametaka fantsom-pandrosoana miaraka amina alim-bolan'ny hydrofilika, fanoherana ny rivotra ambany, tsy dia be loatra ny rano miangona, manohitra ny harafesiny. 2. fefy vy nandrisika, fanoherana tsara ny harafesina ary maharitra maharitra. 3. Ny fizarana hafanana dia manasaraka ny loharanon'ny hafanana sy ny loharano mangatsiaka, avy eo ny ranoka ao anaty fantsona dia tsy misy famindrana hafanana mankany ivelany. 4. Rafitra rivotra mifangaro anatiny manokana, fizarana airflow mitovy fanamiana, mahatonga ny fifanakalozana hafanana ho ampy kokoa. 5. wor samihafa ...
Ahoana ny fiasan'ny kodiarana desiccant? Ny kodiarana desiccant maina mora dia miasa amin'ny foto-kevitry ny sorption, izay ny adsorption na ny fizotry ny fandraisana izay anesoran'ny desiccant ny etona rano mivantana avy amin'ny rivotra. Ny rivotra ho maina dia mamakivaky ny kodiarana desiccant ary ny desiccant dia manala ny etona rano mivantana avy amin'ny rivotra ary mitazona azy rehefa mihodina. Rehefa niampita ny sehatry ny famerenana indray ny desiccant feno hamandoana, ny etona rano dia nafindra tamina renirano nahamay, izay ...